I-HEECHI TECH izibophezele ekuhlinzekeni ngemikhiqizo enempilo nolwazi lokubhema kubantu abaningi ababhemayo.I-HNB E-cigarettes isiwumkhiqizo omusha othengwayo we-elekthronikhi, osuthandwa kakhulu emhlabeni jikelele.
I-HEECHI TECH yasungulwa ngo-2015. Le nkampani izibophezele ekwenzeni ucwaningo emkhakheni we-HNB (Heat Not Burn), futhi njengamanje inohlelo oluphelele lwempahla yengqondo ohlelweni lobuchwepheshe bokushisa okungashisi.
Izinti ze-HEECHI ezishisisa i-herbal zisebenzisa i-herbal yemvelo ekhethekile, ngephunga elimnandi lendabuko, futhi ihlanganisa ukunambitheka okufana nogwayi, okudala umuzwa oyingqayizivele wokubhema.
PURE HeeChi Blueberry, ibhokisi izithelo fresh amathiphu akho ngomunwe! Amajikijolo akhethiwe acindezelwe abe ukuqhuma okukodwa ngobuchwepheshe bokudla obunqamula onqenqemeni. Ngefomula ye-herbal ehlukile, yephula i-stereotype ye-heastick enongiwe futhi iletha ukuzizwisa kwezithelo okucushwe kahle.
Ama-flavour acindezelwe kubhontshisi oqhumayo ngobuchwepheshe obuphambili, impilo ende yesitolo kanye nokuthuthuka okunamandla. Ngokuluma okulula, ungase ujabulele ukunambitheka kwakho okuthandayo nganoma yisiphi isikhathi noma kuphi
Ukunambitheka okumnandi nokumuncu kancane kwamajikijolo aluhlaza anocezwana lwe-mint. Inketho engcono kakhulu yomthandi wezithelo, jabulela okuhlangenwe nakho okubushelelezi nokunethezekile kwesithelo esimnandi ezandleni zakho! Inhlansi ekhuthazayo yokuphupha emini noma ukuxoxisana.
Le nkampani ihlose ukuhlinzeka ngemikhiqizo enempilo kanye nolwazi olungcono lokubhema kwababhemayo. Singahlinzeka ngomugqa wokukhiqiza oguquguqukayo kanye ne-MOQ. Sikhethe sizokunikeza umkhawulo wakho omkhulu wenzuzo. Xhumana nathi ukuze uthole isampuli yamahhala ngokuthumela.
Okwedlule: I-HEECHI Tangerine Peel Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Olandelayo: I-HEECHI Coffee Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Igama Lomkhiqizo: HEECHI Blueberry Non-Nicotine HNB Herbal Stick